वसन्तको समय सफा गर्नुहोस् कि ईमेल मार्केटि Program प्रोग्राम | Martech Zone
सोमबार, अप्रिल 16, 2012 बुधबार, अप्रिल 11, 2012 Lavon मन्दिर
यो फेरि वर्षको त्यो समय हो। दिनहरू लामो छन् र मौसम सुन्दर छ। मानिसहरूले प्राय: वसन्त समयको सदुपयोग गर्दछन् आफ्ना घरहरू माथिबाट तलसम्म सफा गर्न। मलाई थाहा छ मैले मेरो नम्र घरको गहिरो सफा गरें। तपाईंको ईमेल मार्केटिंग कार्यक्रममा सफाई अनुवाद गर्न यो खराब विचार होईन। यहाँ केही वसन्त सफाई सल्लाहहरू छन्:
स्क्रब! तपाईंको लिस्टहरू स्क्रब गर्न समय लिनुहोस्। पत्ता लगाउनुहोस् कि को तपाईंको मेलमा व्यस्त छैन। म तिनीहरूलाई हटाउन जरूरी नै सल्लाह दिदिन, तर सायद तिनीहरूलाई आफ्नै अंशमा लैजानुहोस् जुन तपाईं पुनः संलग्नता अभियानको साथ सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंको ईमेल मार्केटिंग सूची नवीकरण गर्दछ र निश्चित गर्दछ कि तपाईं मात्र आफ्नो ईमेलहरू ती ग्राहकहरूलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ जुन तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन्।
ताजा जीवन। मँ सँधै वसन्तमा प्रेम गर्दछु जब फूलहरू फेरि फुल्न थाल्छन् - यो सँधै सुन्दर देखिन्छ! के तपाईंको ईमेल अभियानहरूमा पनि यस्तै भन्न सकिन्छ? यदि होईन भने आफ्नो डिजाईन ताजा गर्न केहि समय लिनुहोस्। यद्यपि तिनीहरू सुन्दर छन्, यदि तपाईं एक बर्षको लागि समान डिजाइन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने - यो नयाँ लुकमा प्रयास गर्न समय हुन सक्छ। एक मास्टरपिस बनाउनुहोस्, त्यसैले जब सदस्यहरूले तपाईंको सन्देशहरू प्राप्त गर्दछन् तब उनीहरू छक्क पर्दछन् कि तपाईंका ईमेलहरू कति भव्य छन्!
पोलिश। वसन्त सफाई तपाईंको मेट्रिक्समा हेर्ने अवसर हो। ईमेल मार्केटरको रूपमा, म पक्का छु कि तपाईंले यो पहिले नै गरिरहनु भएको छ, तर साँच्चै उनीहरुलाई हेर तपाईका ग्राहकहरु कुन सामग्री मन पराउँछन् भनेर हेर्न विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाईं यसमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ र ईमेलको एक जोडी पुन: सिर्जना गर्न को लागी तपाईं समान प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ वा अझ राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ!
केहि नयाँ प्रयास गर्नुहोस्। मँ मेरो वसन्त सफाई समय को लागी एक अवसर को रूप मा मेरो घर मा एक ठाउँ को पुन: व्यवस्थित गर्न को लागी प्रयोग गर्दछ - एक नयाँ व्यवस्था को प्रयास गर्न को लागी मलाई कुन सेट अप मलाई रुचि। हुनसक्छ तपाईको इमेज मार्केटिंग प्रोग्रामको साथ तपाईले केहि नयाँ प्रयास गर्न यो समय आयो? २०११ मा Merkle को "डिजिटल इनबक्सबाट हेर्नुहोस्" अनुसार, "Internet 2011% इन्टरनेट सक्षम मोबाइल फोनको साथ यो आफ्नो व्यक्तिगत ईमेल खाता जाँच गर्न प्रयोग गर्दछ।" सायद तपाईको इ-मेल अभियानको साथ तपाईले रूटमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यहाँ नबस्नुहोस्! मोबाइलमा ध्यान केन्द्रित गर्न कोशिस गर्नुहोस् कि यदि त्यहाँ तपाईंको दर्शक छन् वा सदस्यता लिन पाठ? तपाइँको ईमेल अभियानहरूलाई नयाँ सीजनमा अलिक बढी अम्फ दिन।
वसन्तलाई ती ईमेलहरू सफा गर्न मद्दत चाहिन्छ? ईमेल मार्केटिंग परामर्शदाताहरुमा पहुँच गर्नुहोस् डिलिभ्रा। हामी वसन्त सफा गर्ने हात toण दिन खुशी छौं!
टैग: सफाईसामग्री मार्केटिङइमेल मार्केटिङसूचीविभाजनसदस्यहरू
योजना, डिजाइन, र एक वेबसाइट अनुकूलन
अप्रिल 16, 2012 मा 4: 43 PM
यो तपाईंको इमेल सूची सफा गर्नको लागि एक राम्रो समय हो र इमेल सेवा प्रदायकहरूले तिनीहरूले "रुचिहीन" सन्देशहरू भनी निर्धारण गरेका फिल्टरहरूसँग त्यसो गर्ने अझ धेरै कारणहरू छन्। तपाईंको पुरानो इमेल ठेगानाहरू र गैर-प्रतिक्रियाकर्ताहरू सफा गर्नाले तपाईंको इमेल रणनीतिलाई ठूलो मद्दत गर्नेछ! नयाँ नीतिहरूमा थप विवरणहरूको लागि यो लेख हेर्नुहोस् http://spotright.com/digital-marketing/spotiq-segment-now/